Outline VPN တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ဖန်တီးမလဲ ? - AtoZ Daily
Outline VPN တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ဖန်တီးမလဲ ?
Outline Manager မှာ Server ကို Set Up လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Cloud Server ၁ ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးရမှာပါ။ Cloud Service တွေထဲမှာ Digital Ocean , Google Cloud , Amazon Lightsail စတာတွေ ပါပါတယ်။ Cloud Service တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နည်းတွေကိုလည်း အဲဒီမှာ ပြောပြပေးထားပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးက Amazon Lightsail နဲ့ ချိတ်ဆက်တာပါပဲ။ Set Up ကို နှိပ်ရင် Amazon Lightsail ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရောက်သွားမှာပြီး Amazon Lightsail မှာ Register အရင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဖို့အတွက် Credit Card , Paypal တို့ကို အသုံးပြုရမှာပါ။
Amazon Lightsail မှာ Log In လုပ်ပါ။Create Instant ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Time Zone ကို ရွေးပြီး Server တစ်ခုကို Create လုပ်ရမှာပါ။အဲဒီမှာ Amazon Lightsail ရဲ့ Server တွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံထဲက ၁ ခုကို ရွေးပြီး Cloud Server ၁ ခု အဖြစ်ဖန်တီးပြီးရင် VPN Server အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရမှာပါ။ နိုင်ငံ ၁ ခုကို ရွေးပြီး Settings ထဲသွားရင် Server ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ပြီးရင် Outline Manager မှာ Amazon Lightsail ရဲ့ Cloud Server တွေကို Set Up လုပ်လို့ရမှာပါ။
(Amazon Lightsail မှာ Server တစ်ခု ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတာ ပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။တည်ဆောက်ပြီးရင်တော့ Outline Manager မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်သွားရုံပါပဲ။)
Amazon Lightsail မှာ Server အသုံးပြုခက ၁ လကို ၅ ဒေါ်လာလောက်ကျသင့်မှာပါ(၃.၅ ဒေါ်လာတန်လဲ ရပါတယ်)။ Connection Tab ထဲသွားရင် My Access Key ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒါက Device တွေက Outline VPN App မှာ ထည့်သုံးလို့ရအောင် Key တွေ ထုတ်ပေးတာပါ။ အဲဒီကနေ Key တွေထုတ် ကော်ပီကူးပြီး VPN သုံးချင်တဲ့ Device တွေကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
VPN သုံးရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်
သုံးစွဲပီးသား ဘူးခွံတွေနဲ့ မီတာခပေးစရာမလိုဘဲ အဲကွန်းတီထွင်လိုက်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား
မိမိတို့၏ တစ်နေ့တာမှာ ဖုန်းလုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့ အချိန်များ